China Round Bhodhoro Type Counter-kuyerera Kutonhora Towers Mugadziri uye Mutengesi | Yubing
Yakavhurika wedunhu kutonhora shongwe ndiyo inopisa chinja, iyo inogonesa mvura kutonhodzwa kuburikidza yakanangana nemhepo.
Iko kupisa kwekupisa kubva kumvura kuenda kumhepo kunoitwa pamwe nekunzwisisa kupisa kupisa, asi zvakanyanya neyakavanzika kupisa kupisa (kubuda kwemvura kwechikamu chemvura mumhepo), izvo zvinoita kuti zvikwanisike kusvika kutonhorera kutonhora kwakadzika pane kwakadzika tembiricha.
Mvura inopisa inotonhodzwa inopomberwa kumusoro kweiyo yakavhurika kutonhora shongwe kuburikidza nepombi. Iyi mvura yakakamurwa uye inogoverwa pamusoro pechinjanai kupisa pamusoro neepasi yakamanikidza mvura yekuparadzira mhuno.
Yakapeperetswa neiyo fan, mweya nyowani unopinda muchikamu chezasi cheiyo yakavhurika kutonhora shongwe unit uye inopukunyuka kuburikidza nechikamu chepamusoro mushure mekupiswa uye kuguta nekupfuura nepakati yakanyoroveswa kupisa nzvimbo yekumusoro.
Nekuda kwekumanikidza kwepasirese, nekuda kwenzvimbo yekuchinjana, mvura inopararira nenzira yunifomu, inowira pasi kukwirira kwese. Nzvimbo yekuchinjana inowedzerwa.
Mvura, yakanyoroveswa nekuda kwekumanikidzwa kufefetwa, inowira mumudziyo wakadzika pazasi peshongwe. Ipapo mvura inosvirwa kuburikidza nesitirita. Vanodzinga drift vari panzvimbo yemhepo vanoderedza kudzikisira kurasikirwa.
Bhodhoro remhando yekuyerera kuyerera kutonhora shongwe inotora inozvishandira-inotenderera yakaderera-kumanikidza inosasa mudziyo kugovera mvura zvakaenzana mukati meshongwe. Iyi ndiyo yakajairika uye ine hupfumi chizvarwa chekutanga kutonhora shongwe kubva kuvapo kwekutonhora shongwe. Iyo Fiberglass Yakasimbiswa Polyester (FRP) casing yakatenderera yakaumbwa nekudaro ichibvisa chakakosha chinzvimbo chinodiwa uye haina kukanganiswa nemafambisirwo arikuitwa nemhepo mafambiro. Iyi modhi inokodzera zvidiki zvinotonhorera zvido, kutanga pa5 HRT (kupisa kupisa tani) kusvika 1500HRT. Aya akateedzana kutonhora shongwe akakodzera kune akajairwa HVAC kunyorera uye dzakasiyana nzira dzekugadzira nzira kutonhora.
Kubudirira kwepamusoro nekuita
Lightweight & yakasimba
Kuisa kuri nyore
Yepazasi ruzha sarudzo dziripo
Pashure: Yakasimudzira Dhizaini Yekuyambuka-kuyerera Towers yeiyo Simba Kugadzirwa, Hombe-yakakura HVAC uye Maindasitiri Zvivakwa
Zvadaro: Yakatemerwa Dhaidhi Kutonhora Towers neRectangular Chitarisiko
simba-rinoponesa kutonhora shongwe
FRP kutonhora shongwe
yakakwirira kunyatsoshanda kutonhora shongwe
maindasitiri kutonhora shongwe
vhura kutonhora shongwe
yakavhurika mhando kutonhora shongwe
Round bhodhoro mhando kutonhora shongwe
mvura-yakatonhora kutonhora shongwe
Yakagadziriswa Dhaidhi yekutonhodza Towers ine Rectangular A ...